FOMBA FIASAN'NY CLIENT RELATIONSHIP - Mpiasa an-tapitrisany. Manome vahaolana izay mety indrindra amin'ny mpanjifanay izahay. fifandraisan'ny mpanjifa, fifandraisan'ny mpanjifa, mpanamboatra tapitrisa, fifandraisan'ny mpanjifa, vahaolana mm, vahaolana mm, vahaolana mm,
FOMBA FIASAN-KANJAN'NY CLIENT
FOMBA FIADANANA CLIENT RELATIONSHIP - MILLION MAKERS
Manome serivisy mivantana izahay na amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka sy ny fifamatorana manerana ny tany ary ny tanjonay dia ny hanome foana vidiny mora indrindra isaky ny serivisy fa ho an'ny serivisy sy firenena sasantsasany mety lafo isika amin'ny 5% - 15% raha ampitahaina amin'ny mpanome tolotra manokana mora indrindra ao amin'io firenena io fa manome toky izahay fa ny serivisinay rehetra dia voadinika tsara, havaozina ary marina, toy ny, izahay tsy manome afa-tsy serivisy tsara sy mahomby ihany izay manampy ny mpanjifanay hamonjy fotoana, vola ary loharano hafa amin'ny alàlan'ny fahazoana ny tsara indrindra, ka tsy hanenina mihitsy ny mpanjifanay mandany ny fotoanany, ny volany ary ny fananany.
Miezaka foana izahay manome ny tsara indrindra amin'ny vidiny farany ambany indrindra.
Amin'ny alàlan'ny fanandramana anay dia fantatray fa ny fahafaham-pon'ny mpanjifantsika sy ny fahombiazany dia ny fahombiazantsika. Ny fianianan'ny mpanjifa Million Makers dia mampanantena ny mpanjifanay dia toy izao manaraka izao:
Hatao amin'ny fomba feno fahalalam-pomba sy fanajana ianao amin'ny fifandraisanao aminay.
Mikasika ireo raharaha mifandraika amin'ny fifindra-monina dia omena mpisolovava, tompon'andraikitra lehibe, fanazavana amin'ny antsipiriany ary valiny amin'ny fanontanian'ny mpanjifa ny mpanjifa.
Amin'ny raharaha mifandraika amin'ny fananganana orinasa sy ny fisokafan'ny kaonty banky, ny mpanjifa dia homena consultation amin'ny asa aman-draharaha matihanina, ny andraikitra lehibe, ny fanazavana amin'ny antsipiriany ary ny valin'ny fanontanian'ny mpanjifa.
Fanombatombanana marina mifototra amin'ny fepetra takiana sy fanazavana ny safidy rehetra misy.
Tsy mamporisika ny serivisy hividianana sarany fotsiny izahay.
Raha misafidy ny hitazona ny serivisinay ny mpanjifa dia mandefa azy ireo fifanarahana fandoavam-bola voasoritra mamaritra ny fepetran'ny serivisy izahay.
Raha misafidy ny hitazona ny serivisinay ianao, dia manaiky ihany koa ny mpanjifa tsy hamerina ny sarany aloa amin'ny serivisy rehetra. Manome serivisy marina foana izahay ary raha vantany vao misy ny serivisy dia tsy misy fomba hiverenana satria serivisy matihanina ireo izay tsy azo isaina ary averina toy ny vokatra rehetra.
Ireo mpanjifa manana fandoavam-bola "frais flat" dia mandoa vola iray handoavana ny serivisy iray manontolo voalaza ao amin'ny Fifanarahana amin'ny sarany. Tsy mandoa vola fanampiny izahay amin'ny telefaona, mailaka, na fivoriana. TSY MISY SHOCKERS or VOLA FANAMPINY ho an'ny consultations fanampiny, raha ilaina izany.
Ho an'ny dinidinika momba ny fifindra-monina raha ilaina izany, ny fivoriana fanomanana tafatafa miaraka amin'ny mpisolovava dia tafiditra ao amin'ny sarany.
Ho an'ny resadresaka fanokafana kaonty amin'ny banky raha ilaina dia misy ny fivoriana fanombanana dinidinika miaraka amin'ny consultant / mpisolovava ao amin'ny frais.
Ny fanontanian'ny mpanjifa an-tsambo dia matetika no voavaly tao anatin'ny 1 andro fiasana na taloha kokoa aza, arakaraka ny tsy fitovian'ny fotoana.
Manome fotoana hahombiazana izahay amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fikarakarana tsara indrindra azo atao amin'ny fomba mety.